Fashion for cuisine Japanese okulethwe empilweni yethu kulinganiswa entsha izinongo esivuthayo, niche ahlukene lapho ithatha ginger. It ginger impande abesifazane abaningi beza ukunambitha. Lokhu spice sengezwe izitsha eziningi ngisho iziphuzo. Omunye ethandwa kakhulu - itiye nge-ginger. On izimfihlo ekuwulungiseleleni, sizobe ukukhuluma ngazo kulesi sihloko.
Inkulumo ethi "itiye zokwelapha" lihlotshaniswa iningi lethu nge amajikijolo kanye namakhambi ezifana raspberry, rosehip futhi chamomile. La magama esiyazi futhi ezingajwayelekile, kodwa ungakhohlwa mayelana isitshalo exotic kakhudlwana ngokuthi ginger impande. Lesi simila akuyona nje kuphela esihlwabusayo kakhulu ukubunjwa iziphuzo, kodwa futhi unalo eziningi ayelapha. Kungenxa yalesi sizathu-ginger itiye lizimelele ezimpilweni zethu futhi ngek uzwela gourmets eziningi.
Ginger - kuyalivuthela, isinongo okubabayo, okungase ungeze ku izitsha ezahlukene ngokuphelele. Ikakhulukazi ziphoqa le impande cuisine empumalanga, okuyinto ongeke ukwenze cishe akekho iresiphi ngaphandle kwalo.
Ginger uye enezici Kusizuzisa on umzimba wonke womuntu ngenxa okuqukethwe eliphezulu sebuningini izakhi mkhondo - calcium, potassium, i-phosphorus, i-magnesium, i-zinc nensimbi, amavithamini - A, C, B1 kanye B2, kanye acid ezibalulekile acid.
Tea ne-ginger, lemon noju cishe esisemqoka ekumelaneni zonke izimpawu elibuhlungu komkhuhlane. Lokhu isiphuzo kuyoba isiphuzo okumnandi nje kuphela, kodwa futhi lokuthola usizo oluyilo ezinkantolo kakhulu. Futhi inguqulo abandayo, kuyasiza kakhulu kwegazi futhi ukugaya. Manje, empeleni, ake sixoxe indlela ukulungiselela itiye ginger.
Classic itiye likajinja nesinamoni
Leresiphi iyona isiphuzo ephelele emakhazeni isizini sibonga kabili ukufudumala imiphumela yako.
fake yashizi ginger - 3 wezipuni;
ushukela - 6 wezipuni;
ulamula (orange) juice - 4 wezipuni;
Ekuqaleni, udinga siwabilise, enezele futhi u-ginger, ushukela ukuncibilikisa ngo spoon. Ready itiye abakhwabanisi kahle, enezele futhi kalamula kanye pepper kancane. Khonza hot.
Lapho belungela ukuya khona yayo akufanele bayakhohlwa ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Okokuqala, uma ulungiselela itiye ginger njengendlela umuthi wokwelapha umkhuhlane, amanzi kumele abilisiwe impande ne isivalo evulekile imizuzu okungenani 10.
Okwesibili, uma ukukhiqizwa isiphuzo isetshenziswa akukhona okungenamizwa phansi ginger fresh, kubalulekile ukwandisa isibalo ncamashi kabili. Ubilise lokhu itiye kudinga imizuzu okungenani 20 on ukushisa low.
Futhi okwesithathu, uma umgomo oyinhloko we ukupheka - isiphuzo ngacela ke kubalulekile ukuze ungeze ushukela kancane, ice cubes, kalamula amacembe Mint (oqoshiwe).
Tea ne-ginger noju
ginger impande --10 cm;
amanzi - 400 ml;
uju - 3 wezipuni.
Ginger kufanele kahle wageza, bahlanza futhi uthathe eside tincetu mncane. Lemon nayo wageza ukusika crosswise zibe izingxenye ezimbili. Engxenyeni eyodwa okudingeka ngawakhamela ijusi kanye nezinye cut emibuthanweni encane futhi ubeke izinto ngononina.
Thumela ipuleti ginger ebhodweni, uthele amanzi ashisayo futhi uhlanganise kahle. Inhlanganisela Akusukume imizuzu okungenani 20 (mhlawumbe isikhathi eside), bese uyifaka kwi-tincetu lemon nezinyosi, ugovuze kahle, futhi ukulungele ukuba baphuze kungenziwa batheleka izinkomishi.
Tea ne-ginger, usinamoni ne jusi
black noma green tea;
ginger (oqoshiwe) - 2 amathisipuni;
ushukela (uju kungaba) nelithi ulamula ukunambitha.
I teapot kufanele uthele abamnyama (green) itiye, usinamoni induku 2 amathisipuni ginger. Thela amanzi abilayo bese ake ume imizuzu 10. Ready ukuphuza kungenziwa batheleka izinkomishi, lemon noshukela (noma uju) engeza ukunambitha.
Fashion for amadoda: ukwakha indlela zikanokusho obunobunye
Ungabona kanjani ukuthi uhlamvu komuntu ukubukeka?
Tibetan ukucula nezitsha - oluyimfihlakalo yokwelapha umsindo ithuluzi
I-Paint Castellani: imiyalo yokusetshenziswa